#KathradaMemorial: Ipolitiki nokwethembeka akuhambisani – Pravin Gordhan | News24
#KathradaMemorial: Ipolitiki nokwethembeka akuhambisani – Pravin Gordhan
Durban - Lowo owayenguNgqongqoshe wezeziMali uPravin Gordhan uthe kuyintokozo kuyena ukuhambela inkonzo yesikhumbuzo sika-Ahmed Kathrada.
UPravin uthe useyajwayela ukuthi uma emenywa ezindaweni ezifana nale ngeke esabizwa ngoNgqongqoshe, kodwa useyilungu elijwayelekile nje lomphakathi.
Uthi lezi zinyanga ezingu-15 ezedlule kube yizinyanga ezinzima kakhulu kuyena kodwa wayebekezele ngoba ingekho into angayenza.
UGordhan uthe sisesikhathini esinzima futhi kunefu elimnyama eligubezele leli lizwe, kanti uma izimo zinjena uyaye abheke kubantu abafana noKathrada abantu ababenomthetho.
Uthe ubebukela kakhulu kulo mholi ngoba wayenokwethembeka ngisho nakwezombusazwe.
"Osopolitiki kanye nokwethembeka yinzito ezimbili ezingahambisani nhlobo. Ukwethembeka akukho kwezepolitiki ngisho nakwamanye amazwe kunje, ngakho-ke asingenzi sengathi yinto ebhekene neNingizimu Afrika kuphela," kusho uGordhan.
OLUNYE UDABA:I-DA ifuna abe-NPA bahoxise amacala abekwe uPravin Gordhan
UGordhan uqhubeke wathi ngesikhathi sithola inkululeko ngonyaka ka-1994 asizange siyithole inkululeko kwezomnotho yingakho sihlukene kangaka siyizwe futhi yikhona lokhu okusenza singalingani.
Uthi yize sekuphenduke isiqubulo esijwayelekile ukuthi kumele kube khona ushintsho kwezomnotho, kodwa kumele sisebenze kanzima ukutakula labo abangakayizuzi inkululeko yezomnotho futhi lowo wumsebenzi wawo wonke umuntu wakuleli.
UGordhan ubuye wagadla kuMengameli Jacob Zuma mayelana nombiko okusolakala ukuthi yiwona owadala ukuba axoshwe, wathi: "Abantu kumele bakhathazeke uma kusakhona izingane ezifundela ngaphansi kwezihlahla ngoba ingekho ingqalasizinda. Imali ikhona, ukuthi nje ayisetshenziswa ngendlela"
Uqhubeke wathi kusazoba nzima kodwa kumele sizame indlela yokutakula umnotho wakuleli.
"Besingekho nesidingo sokuthi umnotho wakuleli wehle kangaka ukube siziphethe kahle, kodwa-ke leyo indaba yolunye usuku."
UPravin uthe useyilo iLungu le-ANC ePhalamende, okwamanje.